Dekọọ ma hazie ncheta olu gị na Aura | Esi m mac
Ọ bụ ezie na iPhone, ma ọ bụ ntụpọ ya na iPad, bụ ngwaọrụ kwesịrị ekwesị maka ịme ndekọ na ijikwa ha, ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị na-achọ ụbọchị niile ka ha na-edekọ ndekọ ha, ihe ndekọ, echiche, ihe ncheta, remind na Mac App Store anyị nwere ike ịchọta ngwa dị iche iche na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ a mana mgbe ụfọdụ nzukọ ha nwere ike ịhapụ ntakịrị ịchọrọ. Aura bụ ngwa nke dị na ụlọ ahịa ngwa Mac maka ọnwa ole na ole, ngwa ahụ na-enye anyị ohere ịhazi ngwa ngwa na ndekọ dị mfe anyị na-eme na Mac.
Aura - Ndetu Ntanetị Audio, nwere ọnụahịa oge niile na Applọ Ahịa Ngwa nke euro 0,99, ma na-enye anyị ohere ịhazi ihe ndekọ ahụ na agba dị ka ụbọchị emere ya. N'aka nke obodo, ihe ndekọ kachasị gbaa ọchịchịrị bụ nke emere ogologo oge, ebe ndị na-enye agba agba dịkarịsịrị elu na ndị nọ n'elu bụ ihe a na-eme n'oge na-adịbeghị anya.
O doro anya na nzukọ kachasị mma iji nweta ndetu anyị niile na-agbakwunye ha aha, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị mkpa n'oge ụfọdụ. Na Aura anyị nwere ike itinye aha na ndekọ niile iji chọta ha ngwa ngwa. Ndekọ ọ bụla na-etinye bọtịnụ akpọ Preview nke anyị nwere ike gee ntị na ibe nke akụkụ ya, iji mata ngwa ngwa ihe ọ bụ ma ọ bụrụ na anyị agbakwunyebeghị aha ya na mbụ.
A na-edekọ na usoro m4a na 44.1 kHz na 192 kpbs. Aura - Ntanetị ọdịyo nke ihe omimi dị na mbipute 1.0, naanị ya nọ 2.8 MB, ọ chọrọ macOS 10.10 ma ọ bụ karịa ma ọ bụ 64-bit processor. Site n'iji otu usoro ahụ dị ka ngwaọrụ iOS, m4a, anyị nwere ike ịdegharị ihe ndekọ niile na ngwaọrụ anyị ma ọ bụrụ na anyị kwesịrị ige ha ntị mgbe anyị na-eme ihe ndị ọzọ na Mac.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Dekọọ ma hazie ncheta olu gị na Aura